‘Miverena Amin’ilay Mpiandry sy Mpiandraikitra Anao’ (1 Petera 2:25)
‘Miverena Amin’ilay Mpiandry sy Mpiandraikitra Anao’
Efa nanjo anao ve ny iray na ny maromaro amin’ireo olana noresahina tato amin’ity bokikely ity? Raha izany, dia tsy irery ianao. Nanana olana mitovy amin’ireny koa ny mpanompon’Andriamanitra tsy mivadika maro na taloha izany na ankehitriny, nefa nahavita niatrika an’izany rehefa nampian’i Jehovah. Afaka manampy anao koa izy.
Hanampy anao i Jehovah rehefa hiverina aminy ianao
MATOKIA fa hanampy anao i Jehovah rehefa hiverina aminy ianao. Hampiany ianao mba tsy hiady saina na tsy hitana lolompo na tsy hanamelo-tena intsony fa hilamin-tsaina. Lasa te hanompo an’i Jehovah miaraka amin’ny mpanompony indray ianao avy eo. Hitovy amin’ireo Kristianina tamin’ny taonjato voalohany ianao amin’izay. Hoy i Petera momba azy ireo: “Tahaka ny ondry nania mantsy ianareo taloha, nefa ankehitriny niverina tamin’ilay mpiandry sy mpiandraikitra anareo.”—1 Petera 2:25.
Ny miverina amin’i Jehovah no zavatra tsara indrindra azonao atao. Nahoana? Satria hampifaly ny fon’i Jehovah ianao raha manao izany. (Ohabolana 27:11) Manana fihetseham-po mantsy izy ka tena misy vokany aminy ny zavatra ataontsika. Na izany aza anefa, dia tsy manery antsika ho tia sy hanompo azy izy. (Deoteronomia 30:19, 20) Hoy ny manam-pahaizana iray momba ny Baiboly: “Tsy misy famohana azy avy atỳ ivelany ny fon’ny olona, fa tsy maintsy sokafana avy any anatiny.” Isika ihany àry no afaka manokatra ny fontsika. Manao izany isika rehefa tia an’i Jehovah sy manompo azy foana. Izany no fanomezana sarobidy azontsika atolotra azy sady mampifaly ny fony. Tsy misy mahasambatra noho ny hoe manompo an’i Jehovah, ilay mendrika hotompoina.—Asan’ny Apostoly 20:35; Apokalypsy 4:11.
Ho sambatra tokoa ianao raha miverina manompo an’i Jehovah, satria hahazo izay ilainao eo amin’ny lafiny ara-panahy. (Matio 5:3) Betsaka, ohatra, ny olona maneran-tany te hahafantatra ny antony namoronana antsika olombelona. Noforonin’i Jehovah haniry hahafantatra an’izany mantsy isika. Noforoniny hahita fifaliana amin’ny fanompoana azy koa isika. Tsy misy mahafa-po noho ny hoe manompo an’i Jehovah satria tia azy.—Salamo 63:1-5.
Tena maniry ny hiverenanao aminy i Jehovah. Nahoana ianao no afaka matoky an’izany? Eritrereto ange e! Nivavaka mafy izahay sady nandinika tsara rehefa nanomana an’ity bokikely ity. Angamba anti-panahy na mpitory hafa no nanome anao azy ity. Novakinao ilay izy ka nahaliana anao. Izany rehetra izany dia manaporofo fa tsy manadino anao i Jehovah, ary miangavy anao mba hiverina aminy.—Jaona 6:44.
Tena mampahery ny hoe tsy hadinon’i Jehovah mihitsy ny mpanompony niala taminy. Tena nampahery ny anabavy iray atao hoe Donna izany. Hoy izy: “Niala tsikelikely tamin’ny fahamarinana aho. Matetika aho no nieritreritra ny Salamo 139:23, 24 hoe: ‘Diniho amin’ny an-tsipiriany aho, Andriamanitra ô, ary fantaro ny foko. Diniho aho, ka fantaro ny zavatra mampanahy ahy. Ary jereo sao misy lalana mampahory ato anatiko, dia tariho ho amin’ny lalan’ny mandrakizay aho.’ Fantatro fa tsy an’izao tontolo izao aho, ary tena tsy nety tamiko mihitsy ny hoe anisan’izy io. Ao amin’ny fandaminan’i Jehovah kosa no tokony ho nisy ahy. Nanomboka hitako fa mbola tsy nanary ahy i Jehovah. Nila nitady fomba hiverenana taminy fotsiny aho. Tena faly aho izao fa tafaverina ihany!”
“Nanomboka hitako fa mbola tsy nanary ahy i Jehovah. Nila nitady fomba hiverenana taminy fotsiny aho”
Mivavaka izahay mba hahazo ny “fifaliana avy amin’i Jehovah” indray ianao. (Nehemia 8:10) Tsy hanenina mihitsy ianao raha miverina amin’i Jehovah!
Fanontaniana Fametraky ny Olona Te Hiverina Amin’i Jehovah
INONA NO HATAOKO VOALOHANY?
Mety hila hiverina tsikelikely hanao ny zavatra fanaony ny olona avy narary. Mila mihinana sakafo ara-panahy isan’andro koa ianao, na dia kely fotsiny aza, raha tianao hihamatanjaka ny finoanao. Aza mieritreritra hoe tsy maintsy ho vitanao indray mandeha daholo ny zava-drehetra. Mety ho azonao atao ny manokana minitra vitsivitsy hihainoana famakiana Baiboly na hamakiana azy io, hianarana boky iray, na hijerena ny tranonkala jw.org. Miezaha koa hanatrika fivoriana iray, raha azo atao. Aza hadinoina ny mivavaka mba hanampian’i Jehovah anao. ‘Apetraho aminy daholo izay rehetra mampanahy anao, satria miahy anao izy.’—1 Petera 5:7.
“Rehefa nangatsiaka ara-panahy aho, dia lasa nahamenatra ahy na dia ny hivavaka aza. Nisy anti-panahy niresaka tamiko tamin’ny fotoana tena nilako herim-po mba hivavahana. Nampiany ahy hahatakatra hoe tsy nanary ahy i Jehovah. Nasainy namaky Baiboly isan’andro aloha aho. Lasa nanana herim-po hivoriana indray aho rehefa nanaraka ny teniny. Niverina nanompo aho rehefa nandeha ny fotoana. Tena faly aho fa tsy nanary ahy i Jehovah.”—Eeva.
AHOANA NO HANDRAISAN’NY FIANGONANA AHY?
Matokia fa handray tsara anao ny olona eo anivon’ny fiangonana. Tsy hanakiana na hitsaratsara anao izy ireo. Ho hitanao kosa hoe tia anao izy ireo sady hanao izay azony atao mba hampaherezana anao.—Hebreo 10:24, 25.
“Nahamenatra ahy ny hiverina hivory ao amin’ny Efitrano Fanjakana. Nieritreritra aho hoe ahoana no handraisana ahy. Niteny tamiko ny anabavy iray be taona efa nivory tao tamin’ny 30 taona lasa hoe: ‘Tonga soa ianao, anaka!’ Tena nanohina ny foko izany, satria tonga soa tokoa aho!”—Javier.
“Tonga tao amin’ny Efitrano Fanjakana aho ary nipetraka tany amin’ny faran’ny aoriana mba tsy hisy hahita. Be dia be anefa no nahatadidy ahy nivory tao tamin’ny mbola kely. Niarahaba sy namihina ahy ry zareo ka lasa maivamaivana erỳ aho. Hoatran’ny hoe tafaverina tao an-trano aho.”—Marco.
AHOANA NO HANAMPIAN’NY ANTI-PANAHY AHY?
Ho tsara fanahy aminao izy ireo, ary hidera anao noho ianao te hamerina an’ilay “fitiavanao voalohany.” (Apokalypsy 2:4) Hanampy anao “amim-pahalemem-panahy” izy ireo mba hanitsianao ny dianao. (Galatianina 6:1; Ohabolana 28:13) Mety hanendry olona hampianatra Baiboly anao izy ireo, angamba amin’ny boky Manatòna An’i Jehovah na “Mitoera ao Amin’ny Fitiavan’Andriamanitra.” Matokia fa hampahery sy hanohana anao amin’ny ezaka rehetra hataonao izy ireo.—Isaia 32:1, 2.
“Niezaka nanampy ahy foana ny anti-panahy nandritra an’ireo valo taona tsy niarahako tamin’ny fiangonana. Nasehon’ny anti-panahy iray ny sarinay sasany nalainy, indray andro. Nampahatsiahy ahy ny fifaliako tamin’izaho mbola nanompo an’i Jehovah izy ireny. Te ho faly hoatran’izany indray aho. Tena be fitiavana ireo anti-panahy rehefa nanampy ahy ho zatra hanao zavatra ara-panahy indray.”—Victor.
“Izy no Hampahery Anao”
Misy hira mampihetsi-po be dia be ao amin’ilay fihiranantsika hoe Mihirà ho An’i Jehovah. Afaka mampahery sy mampirisika antsika hanohy ny fanompoantsika izy ireny. Diniho, ohatra, ny tonon’ny hira faha-60. Miorina amin’ny 1 Petera 5:10 izy io, ary mitondra ny lohateny hoe “Izy no Hampahery Anao.”
Jehovah niantso anao satria ianao tso-po,
Aza manahy satria Jehovah tena tia,
Satria ianao voavidy, an’i Jehovah ianao,
Dia izy no hiahy sy hampahery anao.
Niaro anao hatram’izay ka hatram’izao,
Koa izy no hiahy sy hampahery anao.
Raha tianao ny hihaino an’io hira io na ny raki-kira hafa, dia jereo ao amin’ilay hoe ZAVATRA MISY > MOZIKA.